Ukusakazeka kwe-Ultrasonic kwe-Xanthan ne-Guar Gums - I-Hielscher Ultrasound Technology
Izinto zokwakheka kwe-shear ezifana ne-xanthan gum ne-guar gum ziyasetshenziswa kakhulu njengezinguquko ze-rheological.
Ukuze usebenzise ngokugcwele izakhiwo ze-xanthan gum noma i-guar gum, ama-powders kumele ahlakazeke ngendlela efanayo ekubunjweni.
Amandla amakhulu kakhulu we-shear of ultrasonics iyindlela enokwethenjelwa yokuxuba ama-xanthan nama-gums ekufakeni ama-formulation efanelanayo nomkhiqizo.
I-ultrasonic yokwenza i-Xanthan ne-Guarms Gums
I-Xanthan ne-gum guar zivame ukusetshenziswa njengabaguquleli be-rheological, abaqhwayi kanye nezimo eziqinile. Kokubili, i-guar gum kanye ne-xanthan gum kukhona izithasiselo ze-rheology eziwusizo kakhulu ngenxa yamandla abo okuqina kwamanzi. I-viscosity ye-xanthan gum ne-guar gum izixazululo iyancipha ngezinga eliphakeme lokukhipha izingubo; lokhu kubizwa ngokuthi i-shear-thinning noma i-pseudoplasticity. Lokhu kusho ukuthi umkhiqizo ohlotshiswe ukushayela, kungakhathaliseki ukuthi ukuxuba noma ukuthuthumela, kuzoba mncane, kodwa, uma usususwe amandla omgogodla, umkhiqizo uzovimba. Ukusetshenziswa okuhlangene kwe-xanthan i-gum ne-guar gum kubonisa imiphumela ye-synergetic eholela ekuthuthukisweni kwe-viscosity esebenzayo nakakhulu.
Ukuhlanganisa i-xanthan i-gum ne-guar gum ngokuphumelelayo futhi ngokusheshisa ekufomeni, isib. Ukugaya amanzi, ukudla noma izimonyo, ama-powders kumele ahlakazeke ngokufanayo futhi ahlanganiswe. Ama-agitator nama-dispersers avamile avame ukufinyelela emkhawulweni wabo uma kuziwa kuma-slurries ane-viscous anezinhlayiya eziphezulu. I-Clumping ye-powders, ebizwa nangokuthi “Izinhlanzi-Amehlo”, kubangelwa izimfanelo eziphansi zomkhiqizo njengezinhlayiyana ezingakwazi ukufaka izici zabo kuphela esimweni esisodwa esisakazekile.
Ama-ultrasonic shear amabutho yindlela enokwethenjelwa yokusakaza izinto zokwehla kwe-shear-thinning zibe ama-slurries. Imithwalo yezinhlayiyana eziphezulu, i-viscosities ephezulu futhi ivolumu ephezulu Imifudlana ingacubungulwa kalula nge-ultrasonication. Ukukhiqizwa kwezebhizinisi, i-homogenizers ye-ultrasonic ifakiwe ngokuhambisana nokucubungula okuqhubekayo kwe-slurry. Njengoba izinhlayiya zondliwa ngokuqondile cavitational indawo, ethembekile futhi ephumelelayo ukuhlakazeka kufezwa.
Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic kukusindisa isikhathi nemali!
Ukusabalalisa okungafani kakhulu
Imikhiqizo yekhwalithi ephakeme
I-particle high load
Lapho amagagasi amakhulu e-ultrasonic engenwa yiziphuzo kanye nama-slurries, ukucindezela okuqhubekayo nokucindezela okuphansi kudala cavitation Bubbles. I-implosion yalezi zibhamu yenza izimo ezimbi kakhulu endaweni – okuthiwa izindawo ezishisayo – ezibhekene nezingcindezi eziphakeme eziphezulu, izinga lokushisa eliphezulu lokufinyelela ku-6000K, amazinga aphezulu okupholisa kanye nama-jets angama-280m / s. Lezi zimandla ezingavamile ze-ultrasonic zingasetshenziswa ngokuphumelelayo kwezicelo ezihlukahlukene ezifana nokuthi Ukukhokha & ukugaya, dispersions, Emulsions futhi Ukuhlakazeka.
Uhla lukaHielscher lwabaxube be-ultrasonic high-shear lunikeza idivayisi efanelekayo I-Lab futhi R&D kuya egcwele izimboni ukukhiqizwa. I-ultrasonic disperser ingafakwa njengama-inthanethi amasistimu ukucubungula ama-volumes ephezulu kumazinga aphezulu wokusabalalisa. Ama-ultrasonicators asezimboni njenge- UIP4000, I-UIP10000 noma UIP16000 zenzelwe izinhlelo zokusebenza ezisindayo ezindaweni ezifunayo – ekholisa ngamandla abo kanye nokusebenza kahle kwabo.
Ngenxa yezindawo zabo ezinhle kakhulu njengezinguquko ze-rheological, i-xanthan gum ne-guar gum zisetshenziselwa kakhulu emikhakheni eminingi yezimboni. Ukuze uzuze ngokugcwele izici zabo, impahla ye-xanthan ne-guar kumele ixutshwe ngokulinganayo ekufakweni. I-Ultrasound yindlela esheshayo neyithembekile yokulungisa ukuhlelwa okufanayo I-Lab, ibhentshi-phezulu futhi Izimboni isikali. Kanye nezinsini ze-xanthan ne-guar zisetshenziselwa kakhulu ezimbonini eziningi, ngakho-ke ama-ultrasonicators asetshenziselwa izimboni eziningi futhi anconywa kakhulu ngenxa yabo ishear ephakeme evelele ukuxuba.
Ukusetshenziswa kwe-Xanthan Gum
Imfucuza Yokushisa Amafutha:
Ukulungiselela ukushisa izikhukhula, imboni yamafutha yasebenzisa i-xanthan gum eningi, ngokuvamile ukugaya udaka. Lawa manzi asebenzayo akhonza ukuthwala izisulu ezinqunywe yi-drilling back to surface. I-Xanthan gum inikeza okuhle “ukuphela okuphansi” i-rheology. I-viscosity ye-drilling fluid iyanda lapho ukunyakaza kunciphisa, okuvumela uketshezi ukuthi kube nokuvumelana okuketshezi uma ukuqhuma kwenzeka futhi bese kuba yinto eqinile xa ukugaya sekume.
I-Xanthan i-gum iyinhlanganisela ephindaphindiwe esetshenziselwa ukudla okucutshungulwa okufana nesaladi yokugqoka, amasoso, isobho, nezimpahla ezibhaka. I-gluten ingahle ibekwe kahle yi-xanthan gum. Ngakho-ke, i-xanthan i-gum iyisithako esibalulekile kwimikhiqizo engenamagundane.
Ezithombeni, i-xanthan gum isetshenziselwa ukulungisa ama-gel amanzi, ngokuvamile ngokubambisana nama-bentonite. Isibonelo, kungumuthi ojwayelekile kakhulu emasimini. Ibuye isetshenziswe emulsions yamafutha-emanzini ukuze kuqiniswe amaconsi amafutha ngokumelene ne-coalescence. Kuyaziwa nangokuthi izakhiwo zaso zesikhumba zihamba kahle.
Abahlakazeli bezimboni ze-ultrasonic
Ukusetshenziswa kwe-Guar Gum
Imbonini yokudla idla ingxenye enkulu kunazo zonke ye-guar gum (eyaziwa ngokuthi i-additi E412 yokudla) futhi ijwayele imikhiqizo engekho gluten.
Ngaphandle kwe-xanthan gum, i-guar gum ishintshi se-rheological esetshenziswa ngaso sonke isikhathi njengoba ist up up viscosity futhi inamandla kahle kakhulu ukuqina amandla. Isetshenziswe njenge-stabilizer, i-guar gum ivimbela izinhlayiya ukuxazulula.
Amanye amagatsha embonini asebentisa i-guar gum afaka embonini ye-textile yokuqothula, ukuqeda nokunyathelisa, imboni yamaphepha ekwakhekeni kwamashidi okuthuthukisiwe, ukumbumbuluza nokucubungula kwamandla okunyathelisa, imboni yeziqhumane njengejenti lokuvimbela amanzi okuxubene ne-ammonium nitrate ne-nitroglycerin, imboni ephuza umlilo njenge-thickener, nezimboni ezihlobene ne-nano-impahla isib ukukhiqiza nanoparticles zesiliva noma zegolide, noma ukuthuthukisa izindlela ezintsha zokwelapha izidakamizwa embonini yezokwelapha.